မော်စကိုဗီယမ် - ဝီကီပီးဒီးယား
(Moscovium မှ ပြန်ညွှန်းထားသည်)
but probablyapost-transition metal
1st: 538.3 kJ/mol (predicted)
2nd: 1760 kJ/mol (predicted)
3rd: 2650 kJ/mol (predicted)
syn 37 ms α 10.59 283Nh
syn 164 ms α 10.46 284Nh
syn 330 ms α 10.31 285Nh
syn 650 ms α 9.95 286Nh
၎င်းဒြပ်စင်သည် ဓာတ်ခွဲခန်းမှသာထုတ်ယူရရှိနိုင်သည့် ရေဒီယိုသတ္တိကြွ ဓါတုဗေဒဒြပ်စင်တခု ဖြစ်သည်။ periodic ဇယား၌ ယာယီအမည် Ununpentium အဖြစ် သတ်မှတ်ထားခဲ့သေးသည်။ ၎င်း၏သင်္ကေတမှာ Mc ဖြစ်ပြီး အက်တမ်အမှတ်စဉ် (atomic number) ၁၁၅ ဖြစ်သည်။ Americium-၂၄၃ အက်တမ်အား calcium-၄၈၏အိုင်းယွန်းများနှင့် ပြိုကွဲပျက်စီးစေခြင်းမှ ၎င်းဒြပ်စင်ကို ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းပြိုကွဲပျက်စီးချိန်၌ ဖြစ်ပေါ်လာသော ဒြပ်စင်၏အက်တမ်လေးခုတို့သည် ၁/၁၀ စက္ကန့်ထက်နည်းသောအချိန်အတွင် Moscovium ဒြပ်စင်၏အက်တမ်များအဖြစ်သို့ ပြိုကွဲပျက်စီးသွားသည်။
မော်စကိုဗီယမ်သည် transuranic (transuranic elements=ransuranium element, chemical element with an atomic number greater than 92 (which is the atomic number of uranium)) ဒြပ်စင်များကဲ့သို့ဓာတ်ခွဲခန်းမှသာထုတ်ယူရရှိနိုင်သည့်ဒြပ်စင်ဖြစ်သည်။
Periodic ဇယား၌ ၎င်းဒြပ်စင်၏တည်နေရာသည် column အမှတ်စဉ် ၁၅ ရှိ Bismuth ဒြပ်စင်၏အောက်၌ တည်ရှိသည်။ ၎င်းဒြပ်စင်၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိ(Physical properties)အရ လေးလံသောသတ္တုဖြစ်ပြီး ဒြပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိ(Chemical properties)အရ အုပ်စုနံပါတ်(၃)နှင့် (၅)ရှိ Metalများကဲ့သို့ ပိုမိုတည်မြဲစွာဖြင့်ဓာတ်တိုးခြင်းအခြေအနေသို့ ရောက်ရှိနိုင်ပါသည်။
ဒြပ်စင်အလှည့်ကျဇယား (Periodic table)
↑ ၁.၀ ၁.၁ ၁.၂ ၁.၃ ၁.၄ ကိုးကား အမှား - Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named Haire
↑ ၂.၀ ၂.၁ ၂.၂ ၂.၃ ၂.၄ ၂.၅ "Superheavy elements:aprediction of their chemical and physical properties" (1975). Recent Impact of Physics on Inorganic Chemistry 21: 89–144. doi:10.1007/BFb0116498. Retrieved on4October 2013.
↑ ၃.၀ ၃.၁ "Predicting the Properties of the 113–120 Transactinide Elements" (1981). Journal of Physical Chemistry 85 (9): 1177–1186. American Chemical Society. doi:10.1021/j150609a021.
↑ "Theoretical Chemistry of the Heaviest Elements", The Chemistry of Superheavy Elements, 2nd, Springer Science & Business Media, 154. ISBN 9783642374661။
↑ ၅.၀ ၅.၁ "Synthesis ofaNew Element with Atomic Number Z=117" (2010-04-09). Physical Review Letters 104. American Physical Society. doi:10.1103/PhysRevLett.104.142502. PMID 20481935. Bibcode: 2010PhRvL.104n2502O.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=မော်စကိုဗီယမ်&oldid=518143" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၃၁ မေ ၂၀၂၀၊ ၁၈:၄၀ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။